Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Air Astana laghachiri na uru
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Kazakhstan na -agbasa • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Ụdị abụọ ahụ, Air Astana na LCC FlyArystan anyị, emeela nke ọma na ụzọ ụlọ.
Ndị njem nke Air Astana Group buuru jiri 91% rịa nde 2.97.
Ma mgbake ahụ ọ ga-adigide ga-agbadata n'ọsọ n'etiti ọdịiche COVID na ị nweta ọgwụ mgbochi.
Kazakhstan's Air Astana Group edebanyela uru dị nde US $ 4.9 n'ime ọnwa isii mbụ nke 2021, na -agbake site na mfu nke $ 66.2 nde maka oge Jenụwarị ruo June 2020. Ndị njem bufere 91% rue nde 2.97, nke 2.5 a na -ebu nde n'ime ụzọ ụlọ, mmụba nke 125%.
N'ikwu okwu banyere ntụgharị, Onye isi ala & onye isi ala Peter Foster ”Ụdị abụọ ahụ, Ikuku Astana na LCC FlyArystan anyị, emeela nke ọma na ụzọ ụlọ. Ọganihu ahịa ahịa siri ike na mmasị maka njem ụgbọ elu karịa ogologo njem ụgbọ okporo ígwè emeela ka Kazakhstan bụrụ ahịa ụlọ na -eto ngwa ngwa n'ụwa, yana uto ndị njem 31% karịa 2019, obi abụọ adịghị ya na ọ bụ ihe mkpali. FlyArystanỌnụ ego dị oke ala. ” Emebere FlyArystan na Mee 2019.
Ọ bụ ezie na ikike mba ụwa ka dị 45% nke ọkwa nke 2019, Foster rụtụrụ aka na "na -amịpụta nke ọma n'okporo ụzọ mpaghara, yana nnukwu agụụ n'okporo ụzọ 'ndụ' na Maldives, Oké Osimiri Uhie, Montenegro, Dubai, Turkey, Georgia na Sri Lanka. , enyekwala aka na ntụgharị, nyere aka site na ndị na -ahụ maka ibu ibu mgbe niile na Boeing 767 anyị gbanwere ”.
Foster dọrọ aka na ntị na ntuziaka maka afọ fọdụrụnụ. “Nọmba ikpe COVID na -aga ọzọ na -ezighi ezi na Central Asia na ọtụtụ mba ebe anyị na -efe efe. Ma mgbake ahụ ọ ga-adigide ga-agbadata n'ọsọ n'etiti ọdịiche COVID na ị nweta ọgwụ mgbochi. "
Air Astana bụ njikọ aka nke Samruk Kazyna Wealth Fund (51%) na BAE Systems PLC 49%). Ọ na -arụ ụgbọ elu 36 ugbu a nke 10 A320 bụ nke FlyArystan na -arụ.
Czech Republic na-anabata ndị njem US